Momba anay | YingYee Machines and Technology Service Co., Ltd.
YingYee Machines and Technology Service Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovana enti-mandeha amin'ny metaly. Mifantoka amin'ny tsena iraisam-pirenena izahay ary manaraka tsara ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny orinasa iraisam-pirenena. Ny ekipanay dia matanjaka amin'ny famolavolana, fikarohana, varotra ary serivisy amin'ny fitaovana fizahana vy. Ny lazantsika sy ny fahamendrehantsika dia mafy orina, noho ny tamberin'ny mpanjifa sy ny fiverenan'izy ireo amin'ny orinasa bebe kokoa.
Andraikitsika ny manompo tsara ny mpanjifantsika sy miaro ny filan'ny orinasa. Izahay dia mikendry ny hamorona toe-javatra mandresy fandresena ho an'ny mpanjifantsika rehetra ary hiezaka araka izay tratranay mba hialana sy hanafoanana ireo olana mety hitranga. Ny fampidirana avy amin'ny mpanjifantsika dia hoentina amin'ny fotoana ilana azy ireo hanomezana fahafaham-po. Ny lazantsika matanjaka sy ny mpanjifa afa-po dia fampisehoana ny serivisinay tena tsara. Azonao atao ny manisa ny serivisy sy tohana tsara ataonay.
YingYee dia nanome milina fanodinana vy tamin'ny firenena mihoatra ny 30, any Etazonia sy Amerika atsimo indrindra. Ny masininay sy ny serivisinay dia mankafy tamberina tena tsara avy amin'ny mpanjifa afa-po izay miverina aminay amin'ny fiaraha-miasa maharitra. Raha ny marina, mihoatra ny 80% ny tahan'ny fanavotana.
Ny masinina rehetra avy any YingYee dia rakotra antoka maharitra herintaona hatramin'ny nandefasana azy, ary koa ny fikirakirana maharitra sy fikolokoloana maharitra.